Pr Zafy Albert: Mbola ao amin’ny polyclinique Ilafy
jeudi, 12 octobre 2017 12:16
Tokony ho tamin’ny 11 ora teo no niala an-tanindrazana hotsaboina atsy amin’ny nosy Maorisy izy. Manao ny fomba rehetra hahafahany miatrika izany ny mpitsabo ato an-toerana, araka ny fanazavan’ireo olona akaiky an’ity filoha teo aloha ity.
Efa tonga halina eto an-drenivohitra ny zanany avy any Ambilobe vao nandre ny tsy fahasalaman’ny rainy, higadona anio alina eny Ivato kosa ny zanany avy any Frantsa. Hiandry an’ity farany ve vao hiainga sa handeha anio tolakandro ?
Mandra-piandry ny fanapahan-kevitra dia maro ny mpanao politika sy olontsotra midodododo mitsidika ity filoha teo aloha ity eny Ilafy. Tonga teny, omaly hariva, ny governemanta notarihin’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana, tamin’ny maraina ny avy amin’ny Tiako I Madagasikara notarihin’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ireo minisitra tamin’ny fitondran’i Pr Zafy toa an’i Daniel Ramaromisa …
Tsaboina ao amin'ny Polyclinique Ilafy hatry ny omaly antoandro ity filoham-pirenena teo aloha sady filoham-boninahitry ny antoko UNDD ity, rehefa tratry ny tsy fahasalamana tampoka ka tsy nahatsiarovany tena. Nentina tao amin'ny hopitaly Befelatanana izy nialoha ny namindrana azy eny Ilafy.